ဇိမ်ခံဟိုတယ် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဇိမ်ခံဟိုတယ်
Liverpool is, ဒါပေါ့, most famous for being the city that spawned The Beatles. But there is much more to this fascinating city's past than just the Fab Four. Recent years have seen extensive re-development in the city and Liverpool is once again on the up swing in terms of popularity.
From the adventure lover to the historically inclined tourist, everyone has something to do in Greece. It has places that are frozen inadifferent time zone altogether. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, it has places that have the exuberance and the vibrancy of today.
Alicante, Spain is located in Eastern Spain in the southern portion of the land of Valencia. Alicante is surrounded by Murica to the south, Valencia to the north, mountains to the north and west, and the Mediterranean Sea on the east. Popular travel destinations in the Alicante province include Alicante, Torrevieja, Benidorm, Alcoy and Elche. Alicante is the second largest city in the Valencia region. It isapopular tourist destination, particularly in the summer. About s...
အဲလစ် Springs မြို့သြစတြေးလျတိုက်ကြီးရဲ့အလယ်မှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်သြစတြေးလျရဲ့ကျယ်ပြန့် outback ၏တရားမဝင်ဒါပေမဲ့အငြင်းပွားဖွယ်မရှိမြို့တော်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကထူးခြားတဲ့မြို့သမိုင်းနှင့်သဘာ features တွေကြွယ်ဝဖြစ်ပါသည်, သြစတြေးလျရဲ့အနီရောင် Center ကလေ့လာစူးစမ်းဖို့ထိုကဲ့သို့သော Uluru အဖြစ်ကမ္ဘာကျော် features တွေပါဝင်သောအရာကနေပြီးပြည့်စုံသောအခြေခံဖြစ်ပါသည် (အေရာစ်ရော့ခ်), Kata Tjuta, ဓမ္မရာဇဝင် Canyon အများနှင့် MacDonnell တောင်တန်းဒေသများ၌.
ကျော်နှင့်အတူ 30 million visitorsayear, Las Vegas is the entertainment capital of the world. From the gorgeous mega-luxury hotels to the exclusive Vegas shows to the unbeatable buffets to the 24 hour casinos, Las Vegas has something for everyone. More and more travellers are booking their Las Vegas trips online. So should you book your next Las Vegas vacation online? Here are the top5reasons to consider booking your Vegas vacation online: 1) Save Money You don't ha...
Rajasthan မှ Tours မှ
Choosing A Hotel In Torrevieja, စပိန်
ဒါကြောင့်ဝေးဇိမ်ခံဟိုတယ်ကြီးဘယ်နေရာမှာမဆို Far East ရှိသွားအဖြစ်, Krabi ထိုင်းအတွက် Rayavadee အများဆုံးအခြားဇိမ်ခံဟိုတယ်များထက်ပိုကောင်းတဲ့အဖြစ်သည်ကောင်းလျှင်မ. ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောကမ်းခြေအပန်းဖြေဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့် 77 အခန်းပေါင်း, တစ်မိသားစုအားလပ်ရက်ထွက်ပြေးဖို့ဘို့ပြီးပြည့်စုံသော, နှင့်တစ်ဦးပျားရည်ဆမ်းခရီးအားလပ်ရက်အထူးသဘောတူညီချက်အဘို့အညီအမျှစိတ်ကူး. အဆိုပါ Rayavadee ယုံကြည်သည်နှင့်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်နေရာထိုင်ခင်းမှအရာအားလုံးကိုခံရဖို့ကိုမွငျခံရဖို့ရှိပါတယ်, အခိုင်ခိုင်လုံလုံရန်, ထိုကမ်းခြေ, နှင့်အစားအစာစုံလင်သောဖြစ်ခြင်းနီးစပ်များမှာ. Krabi ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...
If you have ever enjoyed Walt Disney World or have heard about it, you will loveacheap holiday vacation at Disneyland Paris. Located just twenty miles from Paris the incredible creation is also known as Euro Disney. You will find shops, hotels and restaurants. You will find the two parks similar to Magic Kingdom and the Disney MGM Studios. The one park similar to Magic Kingdom has forty-two attractions while the Disney Studio has thrilling rides inamovie like setting. You...
တွင် 1999, Canadian Pacific Hotels & Resorts acquired Fairmont Hotels to form Fairmont Hotels and Resorts,aglobal company withaportfolio of unique architecturally interesting luxury hotels throughout North America and the Caribbean. The official name of the hotel since then has been the Fairmont Royal York. In the early years of the New Millennium Fairmont invested almost $15 million in transforming the new lobby area, public meeting areas, the Epic Restaurant as well as th...
သငျသညျကောလိပ်ကျောင်းသားများနွေရာသီများအတွက်ဥရောပတဆင့်ခရီးသွားလာကြဘူးစဉ်ကတစ်ခုခုအဖြစ် Hostel စဉ်းစားစေခြင်းငှါ,. သို့သော်, Hostel တော့ဘူးရုံကောလိပ်လူအစုအဝေးအဘို့မက, အခုဆိုရင်အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူမျိုးနှင့်နောက်ခံတို့ပါဝင်သည်. သင်တစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်တစ်ဦးခရီးသည်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, တစ်ဘော်ဒါဆောင်မှာတည်းခိုသင့်ရဲ့ခရီးသွားအတွေ့အကြုံမှထည့်ပါလိမ့်မည်သည့်စွန့်စားမှုရှိနိုင်ပါသည်.
ဂါများတွင်ဟိုတယ်များအဘို့အရွေးချယ်မှု၏ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်, သင်ရုံမှန်သည်မပြဿနာရှာဖှတဦးတည်းရှိသည်လိမ့်မယ်. ရိုးရှင်းတဲ့လူငယ်ဘော်ဒါဆောင်ကနေငါးကြယ်ပွင့်ဇိမ်ခံဟိုတယ်မှအရာခပ်သိမ်းဤလှပသောမြို့၌သင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်း. ငါးကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်သင်တို့အဘို့ အကယ်., ဟိုတယ် Torrequebrada ကြိုးစားကြ, သငျသညျမလိုအပ်နိုင်တော့ရှိသမျှကိုသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူ, အိမ်သူအိမ်သားလောင်းကစားရုံများတွင်တစ်ခုအပါအဝင်. သည်အခြားဇိမ်ခံဟိုတယ်များပုဂ္ဂလိကကမ်းခြေရှိ, ကျန်ကြွင်းသောအရပ်နှင့်အတူအပိုကြီးမားခန်း, တင်းနစ်တရားရုံးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Bab အဖြစ်အများအပြားန်ဆောင်မှုများ ...
5 အွန်လိုင်းသင့် Next ကိုဂတ်စ်အားလပ်ရက်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်နိုင်ရန်အကြောင်းပြချက်များ
San Francisco ကပြည်ထောင်စု Square ကိုဟိုတယ်
San Francisco isacity of great architecture which is engulfed by beautiful fog. San Francisco is located on the west coast of the U.S. at the tip of the San Francisco Peninsula and includes significant stretches of the Pacific Ocean and San Francisco Bay within its boundaries. Several islands are part of the city, notably Alcatraz, ဘဏ္ဍာသည်ကျွန်း, and the adjacent Yerba Buena Island. It is also well known for the mesmerizing architecture the Golden Gate Bridge. This pa...
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်ကြိုက်တတ်တဲ့အားလပ်ရက်အမျိုးအစား, သငျသညျစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ဇိမ်ခံဟိုတယ်ရှိ! ဇိမ်ခံဟိုတယ်များတွင်တည်းခို၏အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်, သင်တစ်ဦးတောအားလပ်ရက် setting ကိုရှေးခယျြလျှင်ပင်, သင်တစ်ဦးအားလပ်ရက်အမှန်တကယ်ပျော်စရာစေသည်သက်သာခြင်းနှင့်လိုက်မယ်ဖို့တစ်ရက်ရဲ့အဆုံးမှာပြန်လာနိုင်ပါတယ်. သငျသညျတောင်တက်သို့မဟုတ်နှင်းလျှောစီးအဘို့အတောင်တို့နှိပ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, သမုဒ္ဒရာကမ်းခြေကိုဦးတည်, ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သွားရောက်လည်ပတ်, ဇိမ်ခံဟိုတယ်များကြွယ်ဝပြည့်စုံ. အဘယ်ကြောင့်ဇိမ်ခံဟိုတယ်မှာနေဖို့? pampered ခံရဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဒါဟာင်. ဒါဟာဖြစ်ခဲ့သည် ...
သည် Le Canonnier ၏အပန်းဖြေ Resort ကို
The classic holiday would beabeach resort or skiing package. သို့သော်, for those looking for somethingabit different, why not try the Lake District in Northern Italy. The lakes of Como, Maggiore and Garda are renowned for their outstanding natural beauty and incredible scenery. There are plenty of historic towns scattered along the shores of the lakes. All are characteristic of the area with shuttered ochre houses, cobble streets and small churches. Travelling There...
Cap ကာနမှာသဘာဝအလှအပနဲ့ဇိမ်ခံ Estates နှင့်အတူလုပ်ကြံ Get, ဒိုမီနီကန်. ဦးထုပ်ကာန, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ, ကမ္ဘာ့လာမယ့်ကြီးမြတ်ဦးတည်ရာဖြစ်သတ်မှတ်, ယင်း၏အရာရှိတဦးက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာ bannered ကြောင့်. ဒါဟာဝေးစိတ်ကူးယဉ်နေ. Cap ကာနများအတွက်အစီအစဉ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးကုန်းတွင်းပိုင်း Marina ပါဝင်သည်, ဇိမ်ခံဟိုတယ်အများအပြား, Villas, နှင့်ကမ်းခြေကလပ်, ငါးဂေါက်ကွင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိက estates. အဆိုပါမာစတာအစီအစဉ်ကို Cap ကာနထိပ်ခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာစေရန်ဖြစ်ပါသည်, တောင်အမေရိက၏ဤအခြမ်း. ...
သင့်ရဲ့ပိုမိုနှစ်သက်ဘာလီကျွန်းဟိုတယ်ကို Select လုပ်ပါရန်ကိုဘယ်လို
Bali isawonderful island situated in Indonesia, the ultimate tourist destination in Asia, တန်ဖိုးရှိတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်. Most people come to Bali for its beach, waves, နေ, some come for business, some come for its undying art and culture, some come for its breathtaking landscapes and some for pure relaxation. Choosing Bali for your holiday destination, of course you should select and decide your preferred Bali Hotel which would match your interests. There are myriad of accommodation...
အဆိုပါ 10 အမေရိကတိုက်များတွင်အများစုမှာဇိမ်ခံဟိုတယ်
I spent part of my honeymoon there, and had to conclude it must be one of the best European honeymoon destinations possible. You dont need to be on your honeymoon, taking your wife, or partner onaromantic vacation to Scotland , you need look no further than Inverlochy castle. You wouldnt want to be staying here if you were looking foracheap honeymoon destination thats for sure, but having said that, if you get the chance to stay at Inverlochy Castle, then take it. ...
ဧည့်သည်များဟိုနိုလူလူမှလမ်းညွှန်, ဟာဝိုင်ယီကျွန်း, ယူအက်​​စ်အေ
If you are looking for the ultimate French Polynesia luxury hotel, and one that is off the beaten track, then look no further than the Te Tiare Beach Resort, for an exotic Tahitian vacation. To access the resort you needaboat, followinga35 minute flight from Tahiti, and thenashort drive on Huahine, followed by 15 minutes on the boat. My wife and I visited the Te Tire Beach Resort as part ofaSouth Pacific tour, and we only had three days, four nights in this Fren...
အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားဇိမ်ခံကားဟိုတယ်၌ Huahine ၏တဟီတီကျွန်းတွင် Te Tiare သဲသောင်ပြင်၏ပစိဖိတ်ကျွန်း Resort ကို Is
Family holidays can be fun and exciting for all ages. Here are some pointers for finding the best holiday for your family. First you need to determine the common interests of the family. Ask your children what they would like to see and what theyre studying in school. If you have very young children then usually you will know better than them but try to get them involved. Think of you and your spouse as well; what may be great fun for the kids may be boring and annoyi...
လန်ဒန်ဟိုတယ် – သင့်ရဲ့အိပ်မက်ထဲကနေထိုင်ရန်မှတစ်ဦး Gateway မှာ
Hotels in London offers quality service, သက်သာခြင်း, and great value for your money. Keeping in view diversity of travelers and to cater to their various needs, you will findawide range of hotels in London to choose from like luxury hotels, tourist hotels, budget hotels, boutique hotels and B&B hotels.
The Top Bali Luxury hotel is situated right onabroad beach on the south west side of Bali, and it is called The Tugu Bali Hotel. This is very definitely the most romantic hotel in Bali with only 22 အခန်းပေါင်း, and each decorated with priceless antiques and pictures. In fact wherever you turn in the Tugu Bali Hotel you will see artifacts lovingly collected over many years by the owner. Dont for one second think that the hotel is in any way out of date, in fact you will find t...
အဆိုပါ Entertainment က Capital ကို
Immerse yourself in the glitz and glamour of Las Vegas, the world's entertainment capital. Home to the rich and famous, you'll be in good company. ကျော် 38.9 million visitors every year enjoy Las Vegas, staying in some of the most luxury hotels in California. A mind blowing fantasy land with fabulous dining, critically acclaimed shows, fantastic shopping venues and bordered by outstanding desert scenery, prepare to be dazzled. For an adrenaline rush, hope that Lady Luck's ...
ကင်ညာရန်လှည့်လည် & တန်ဇန်းနီးယား
ကင်ညာမှ tour Eurasian Tours မှနှင့် Safari ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ကင်ညာနိုင်ငံ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းခရီးစဉ်ဘွတ်ကင်များနှင့်ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ရာပူဇော်သက္ကာကိုလှည့်လည်အော်ပရေတာ. မြို့ရွာတို့အား right-ခရီးသွားကမ်းလှမ်းမှုကိုခရီးစဉ်, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နေရာများ, စွန့်စားမှုနေရာများ, တန်ဇန်းနီးယား Tours မှ, ကင်ညာနိုင်ငံကမ်းခြေနေရာများ.
နှစ်ဦးစလုံးဇိမ်ခံဟိုတယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးတိုက်ခန်းများအတွက်တည်းခို၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိ. ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အညာဘက်ကိုနေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်ရာတွင်မတိုင်မီန်ဆောင်မှုများတိုက်ခန်းများနှင့်ပဲရစ်ဇိမ်ခံဟိုတယ်များ၏အကောင်းအဆိုး cons Read.
သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်များအတွက်ရိုးရှင်းသော Pack သိကောင်းစရာများ
ပိုများသောအကြောင်းရင်းများထိုင်းခုနှစ်တွင်အဖမ်းခံရ Get ရန်မ
ပေါ်တူဂီ ‘ လစ္စဘွန်း, Algarve နှင့်ဂို့
Newport RI က – အဆိုပါသမုဒ္ဒရာပေါ်ရတနာ